Serba : Mendrika Hananganana Tsangambato ve ny Filoha Azeri izay efa Nodimandry? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, Français, Italiano, srpski, Ελληνικά, English
Iray amin'ireo zaridaina maitso tsara indrindra ao Belgrady ny sahan'i Tasmajdan, izay vao avy nohavaozina, noho ny fanomezana vola 2 tapitrisa euro avy amin'ny governemanta Azerbaïdjan. Niteraka resabe teo anivon'ny bilaogera sy ny mpiserasera serba anefa izany ny herinandro lasa teo ny nanomezana ity vola be ity avy any Azerbaïdan : ho takalon'izany fanampiana lehibe izany, dia hanorina tsangambato ao amin'ny sahan'i Tasmajdan ho an'i Heydar Aliyev, Filoham-pirenena Azeri teo aloha i Belgrady.
Ny tantaran’‘i Heydar Aliyev mikasika ny fitondrany izay mampiady hevitrano nahatonga ireo bilaogera nanadihady raha mendrika hanorenana tsangambato ho an'io karazan'olona io ny fanomezana nataony na tsia.
Vlada Dulovic ao amin'ny bilaogy Living in Belgrade (‘Mipetraka ao Belgrady) nanoratra hoe:
… mety hiteraka olana ny hametrahana tsangambato ho an'olona iray efa nodimandry vao taona vitsivitsy lasa na dia tsy mihoatra ny 3 metatra aza ny haavony. Ary karazan'olona manao ahoana anefa izany !
Hatramin'ny nahafatesany tamin'ny taona 2003, nitondra ity repoblika mpamokatra solika nandritra ny 30 taona ity i Aliyev, voalohany aloha toy ny komonista ary avy eo toy ny Filoha voalohany demokraty, saingy tsy misy fiovana firy akory tamin'ny fitondrany. Nafindrany tamin'ny zanany lahy Ilham ny asany izay nanome voninahitra an'ny rainy sy ny fahefany manokana tamin'ny alalan'ny fanomezana kely ho an'ny firenena mahantra, tahaka an'i Roumanie, ka nankasitrahan'i Bucarest izany fifandaminana izany.
Noheverin'ilay bilaogera Mahlat koa fa ny fitondran'i Aliyev dia toy ny “fitondrana jadona ratsy indrindra” ary nampiany hoe :
Kanefa tsy misy na inona na inona amin'izany ho toy ny zava-dehibe, satria nilaza i [Jovan Krkobabić, praiminisitra lefitra misahana ny raharaha sosialy fa isika “dia tsy tokony hiseho ho toy ny ” inspecteurs de police” ka manadihady izay rehetra efa vita teo aloha. Tsy manam-potoana amin'izany karazan-javatra izany isika…” – na koa hoe, tsy mampaninona ny jadona, satria 2 tapitrisa euros, tompo ô!, koa “hampiasaina ho an'ny tanàna sy ny mponina aminy izany.”
Manontany ao amin'ny bilaoginy i Nebojša Krivokuća hoe nahoana no tsy misy olona milaza ny mombamomba an'i Aliyev mihitsy ao amin'ny fampahalalam-baovao ary nofaranany hoe:
Roa tapitrisa euro dia mazava ho azy fa hanome fahefana lehibe ho an'ny mpanome azy.
Araka izany, amin'ireo mpanankarena, raha mahita olona tia mananihany tafahoatra na manana fahitana hafakely tsy mitovy ny hafa isika, dia mety hisy indray ny hafa hilaza fa hanavao ny ampahany amin'i [Kalemegdan] ohatra, fa saingy kosa mba hananganana sarivongana ho an'i Staline ! Mankalaza azy ihany isika indraindray, na dia izany aza. Mety hisy koa angamba mbola manankarena kokoa, ka hilaza koa fa hanaingo ny saha [Ušće], fa saingy kosa hametrahana tsangambato 30 metatra, tsy hilaza hoe Hitler isika fa efa manana [efitrano fatoriana mitondra ny anarany izy ao amin'ny hotely iray ao Belgrade], sa indray ve i Kim Jong, mety ho tsara kokoa – somary lavidavitra ara-jeografia antsika ny fitondrany kanefa tsy dia zava-dehibe loatra ny fomba nitondrany, sa tsy izany ?